Ukuphila komzimba ngoncedo lwamabhanti
Abanye baya kwindawo yokuzivocavoca, abanye - ukubona umgqirha. Kwaye, ngenxa yokunyuka kwezinto zendalo, khetha zonke iingxaki zam, zilele ebhahleni lokufudumala kwaye zifunda incwadi. Yintoni eya kuba yindlela yokongeza kwamanzi ukudibanisa izinto ezimnandi kunye nokuphila? Kwaye kunokwenzeka yini ukuphucula umzimba ngamabhafu? Ndagqiba kwelokuba ndiqhube iimvavanyo ...
Andizange ndifune ukuya kwi-salon. Iimeko eziphambili kwakufuneka ziqhube iinkqubo kwindawo yokuhlambela - ukuze kwimeko yemozulu awukwazi ukuphuma endlwini. Ndenze uluhlu, ndithenga izithako kwaye ndaqala ukuzama ukuzithandayo.
ABANYE ABANTU ABANTU IPOGORYACHE.
Eyokuqala kwiprogram yam ukuhamba kakuhle yayiyindawo yokuhlamba i-turpentine, leyo, ukugweba ngeempendulo ezininzi kwii-intanethi, zinika impumelelo enkulu yokuvuselela. Enyanisweni, amathole amabini e-turpentine emulsion (ophuzi kunye nomhlophe) okuhlamba ayengabizi, kwaye ukulahlwa kwathembiswa phantse kuzo zonke izifo ezikhoyo. Kwizinto eziqinisekisiwe zabavelisi, kwakufuneka 'baqeqeshe ama-capillaries', kwaye ngenxa yeengxaki zokujikeleza kwegazi, bathi, kwaye kukho ubunzima obuninzi ngempilo.
Enyanisweni, ukuba unyango oluvulekileyo, ukuphumla okhethekileyo okanye ukuzonwabisa, iibhotile zokubhalwa nge-turpentine azithembiswanga. Kwakumfuneko ukumelana nokushisa kwamanzi (ukuya kwizinga), ixesha elichithwe ekubhabheni (ukususela kumzuzu engama-7), ungagxinyi ubuso, ungafaki. Ukongezelela, ngakumbi iingxenye zesondlo zomzimba zacetyiswa ukuba zenziwe nge-petroleum jelly kwangaphambili ukuze ziphephe ukutshiswa. Ndaye ndaqaphela ngononophelo, ndazibona ixesha kunye nobushushu, kwaye yonke into yesikhumba kwiindawo zatshitshisa, zitshisa, kwaye ukuba andizange ndiqhume ngokukhawuleza. Ukongezelela, iimethambo zam zegazi zenziwe "ziphosakeleyo" kwaye, esikhundleni sokuba zomelele, zagqitywa. Emva kokuhlamba waqala ukugaqa iempumlo zakhe. Ukuqhaqha kwaqala ukususela kuzo zonke i-sneeze, kwaye wayeka ngobunzima obukhulu kunye nokulahlekelwa okuqinile.
NJENGOBA I-ROSE KWE-OIL.
Ukugqiba ukuba emva kokuba yonke intente ayindikhathalele, ndaqala ukongeza yonke into endiyicinga ngayo okanye ndiyiva kwindawo ethile ebhafini. I-baking soda (isiqingatha se kilogram ngebhasi), i-decoctions kunye ne-infusion ye-herbs, iodine (i-1 ml), i-hydrogen peroxide (120 ml), udongwe, iwayini elibomvu Ungakhankanyi iifowuni zokuthenga ezenziwe ngokulungeleleneyo, iioli kunye neetyuti ezintle. Kuzo zonke iziganeko, isiphumo sasifana: zonke zibiliswe kuphela ekunelisekeni kokuziphatha - zithi, ndenza yonke into yam impilo ngenxa.
Waziva ukuba utshintsho oluhle emva kokuqalisa ukufaka ingilazi yobisi kunye nama-5-6 amaconsi eoli efunekayo kwibhayibhile kwiingcebiso ze-aroma therapist. Kwaye ndathenga ioli ephezulu kakhulu, ikakhulukazi isiSwidi okanye isiBulgaria. Inkokeli engathandabuzeki yayinayo ioli yama roses. Yaye nangona ibhola elincinci libiza ngaphezu kwey 100 y. e., yena, njengoko bethetha, wayelungele. (Kwi-novel "I-Perfume" uSuskind uthi inkokhelo yeoli, ngaphezu kweetoni ezi-2 zezimbali ezifunekayo.) Emva kwexesha lokuhlambela okuqhenkcezayo, ndaqonda ukuba kutheni amaxesha onke avuka amafutha axabisa ubunzima bawo kwigolide. Ulusu lwam lube luhamba kakuhle, luthande kwaye luvumba.
Ngandlela-thile (uhlobo lwengozi) ndaye kwiSayensi yeNzululwazi yaseRussia ye-Medicine Restorative ne-Balneology. Kukho, ngaphezu koko, ndanikwa ukuba ndithathe ikhosi yokuhlamba i-antioxidant.
Ngomnye ukungaqiniseki (ukuguquka kwashiya uphawu lwalo kumphefumlo wam othethekileyo), ndiphulaphule ugqirha othe wandixelela ukuba ezi bhati ziphuhliso olutsha lweSt. Petersburg kunye nososayensi baseMoscow. I-"chip" ephambili ekubunjweni kwayo i-metaphene, i-antioxidant esebenzayo ende. Njengoko iingcali zithi, izalisa iiseli nge-oksijini kwaye iyanqandeli i-oxidants eyenziwa ngokusilela kwayo. Ukungabikho kwe-oksijini kuhamba rhoqo kunye naluphi na utshintsho olusetyenziswayo kumzimba. Ezi zihlambi zibuyisela ukuhamba kwegazi okuphambili, ukulungelelanisa i-microcirculation yegazi, ukwandisa izibonelelo zomzimba zomzimba kwaye ngenxa yoko kunciphisa uxinzelelo lwengqondo, ukuphucula amandla okusebenza nokulala.
Ukuvuma, konke oku kuphakamisa ukungathandabuzeki. Namhlanje igama elithi "antioxidant" libe yinto efana nokupasa kwihlabathi lobutsha abasemhlabeni kunye nempilo. Imigca emininzi yelungiso ivelisa iimveliso zokunyamekela kunye nokudibaniswa kwama-antioxidants. Enyanisweni, iziphakamiso ezinjalo zihlala zikhona nje ngeendlela zokuthengisa. Nawuphi na umuthi, oquka i-vitamin E okanye i-A, unokuthiwa ngokuthi "antioxidant". Kodwa ekugqibeleni inzululwazi yaba neengxaki, kwaye ndithengela ibhotile yemali.
IIMALI ZE RABBIT.
Ndinconywe ikhosi ye-10-15 inkqubo ye-4 ngeveki. Ngeseshoni nganye kunikwa imizuzu eyi-10-20, ukushisa kwamanzi kufuneka kube ngu-37-38'С.
Ekhaya, ndakhawuleza ndanyuka ngena kwi-tub - andizange ndilinde ukujonga iipropati zakhe. Emva kwemizuzu engama-20, ukukrazula yonke into ephothuzelayo, waphuma emanzini kwaye ... ngenye imini kusihlwayela yonke imisebenzi, engenakuqala isonto. Ndaziva nditsho, ndonwabile kwaye ndikulungele ukwenza izenzo. Kwaye ezimbini iiyure kamva umnqweno wokulala ngokukhawuleza wagqitywa. Njengomdumba obomvana, apho iibhetri zazityhulwa khona, ndawela embhedeni ndaza ndalala-ngokukhawuleza nangakumbi. Iibhonasi ezongezelelweyo ziyanelisekile - ulusu lushintshile (ngakumbi ngokuphawulekayo kunokuba luvela kubusi okanye ubisi): luye lwayeka ukunqanda, lwaba lu-elastic, olubushelelekileyo, olucokisekileyo oluhlaza.
Amava ngamabhafu a ndinceda ukuba ndibeke "yonke into" ekwindla ende nasebusika kunye nexesha elide kunye nokungakwazi ukuyeka umsebenzi. Ngoku, ndicinga ukuba unokuhamba ngeholide unembeza ocacileyo. Kwaye ndincoma ukuba wenze konke okunje ngoncedo lwamabhafu.
Ukukhetha ishenxisa inwele
Susa okanye ulula? Izindlela zokulwa neenwele ezandleni
Ubisi lwe-Silicone - ubomi obutsha okanye iingxaki ezintsha?
U-Alla Pugachyova wacaphukisa isikhalazo ngesibheno kuYulia Tymoshenko
Iintlobo zokwakheka kwempahla kunye nobuchule
Isaladi kunye nekhukhamba, amaqanda neminqumo
Indlela yokwenza okokuqala ngethuba okwesibini ukuzisa?
Ngaba ndinokuhlamba xa ndikhulelwe?
Indlela yokuxelela umntwana ukuba wamkelwa
Iingxaki zokuphila kunye nemilenze - ngaba kukho ubuhlobo?
Inendima yokuziphatha ekukhuliseni abantwana
Ibhinqa elifanelekileyo kumntu wanamhlanje
Izindlela zamasiko zonyango zamathumbu
Usuku lokufumana iindwendwe